आउलान गगन र विश्वप्रकाश नेतृत्वमा ? - Tanahun Awaj
Home समाचार	आउलान गगन र विश्वप्रकाश नेतृत्वमा ?
5th September 2019 176 views
कांग्रेसमा डेढ वर्ष अगावै महाधिवेशन चर्चा
केन्द्रीय कार्य समितिले निर्धारण गरेको कार्यतालिका अनुसार नै पार्टीका तल्ला संरचनाहरु बन्दै जाने हो भने पनि नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुन अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । देश संघियतामा गएको चार वर्ष पुग्न केहि दिन बाँकी रहँदासम्म कांग्रेसको पार्टी संरचना संघियता अनुकुल बन्न सकेको छैन ।
विना अवरोध कार्यतालिका अनुसार टोल देखि प्रदेशसम्मका संरचनाहरु निर्माण हुन सके भने २०७७ फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुनेछ । पहिलो कुरा त सहजै ति समितिहरु बन्लान भन्न गाह्रो छ, किनभने समितिहरु आफु अनुकुल बनाउन नेताहरु लागि पर्दा विवादहरु हुनेछन् र कार्य तालिका प्रभावित हुनेछ ।
अर्काे कुरा अहिलेको पार्टी नेतृत्वलाई अझै अर्काे ६ महिना नेतृत्वमै रहने मोह जागेमा विवाद र्सजाना गर्ने छन् र विषेश व्यवस्थाको हतियार प्रयोग गर्दै कार्यावधि लम्व्याउने छन् । फलतः महाधिवेशन हुने समय २०७८ भदौमा पुग्ने छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसका महाधिवेशदुई अझै २ वर्ष छ ।
झण्डै २ वर्ष पछि हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्न नेताहरु भने अहिलेदेखि नै रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । कोइराला परिवारबाट महामन्त्री बनेका शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शेखर कोइरालाले पार्टीको मूल नेतृत्व अर्थात सभापति मै आफ्नो दावा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सभापतिमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः निर्वाचित हुन चाहेको कुरा लुकेको छैन भने रामचन्द्र पौडेल पनि सभापतिको दौडबाट पछि हट्ने अवस्था देखिएको छैन । उता निर्वाचित हुने दुइ महामन्त्रीका लागि गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, मिनेन्द्र रिजाल,रामशरण महत तथा प्रकाशशरण महत लगाएतका युवा नेताहरु दौडमा सामेल भएका छन् ।
देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुनः निर्वाचित हुन देउवालाई पनि सहज छैन । त्यत्तिकै असहज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि छ । यद्यपि शेरबहादुरलाई तुलनात्म रुपमा सजिलो छ । रुख चिन्हमा मत हाल्ने र आमा कार्यकर्ता माझ देउवा अलोकप्रिय भए पनि उनलाई सभापति बनाउन मत हाल्नेहरुमा उनको पकड छ र कम्तिमा यो पकड कायम राख्न उनले बाकी समय हरसम्भव प्रयास गर्ने छन् । यस्तोमा बलियो टिम नभएका रामचन्द्रलाई सभापति निर्वाचित हुन कठिन हुने कुरामा सन्देह रहेन ।सभापतिको दौडमा जस्तै महामन्त्रीको दौडमा पनि दुइ युवा नेता अगाडि छन्, गगनकुमार थापा र पार्टी प्रबत्ता समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्मा । दुवै नेता कांग्रेस समर्थक मतदाता र युवाहरु बीच लोकप्रिय छन् । उनीहरुलाई लाग्छ , थाापा र शर्माले नेतृत्व गर्ने मौका पाए पार्टीलाई जीवन दिनेछन् । पार्टी प्रबत्ता बनाइएपछि संस्थापन पक्षको नजिक हुन पुगेका शर्मा र अर्काे पक्षमा रहेका थाापा दुबैलाई महामन्त्रीको उम्मेदबार बनाउन सम्बन्धित पक्षले आनाकानी गर्ने सक्ने अवस्था पनि छैन । तर गगनलाई आफ्नो समूहबाट महामन्त्रीको उम्मेदबार हुन जति सजिलो छ, विश्वप्रकाशलाई समूहको नयाँ सदस्य भएका कारण सजिलो छैन । प्रवक्ताका रुपमा पार्टीलाई चलायमान बनाउने कुरामा जुन तदारुकता शर्माले देखाए त्यो उदाहरणिय छ तर गत निर्वाचनमा कांग्रेसको लज्जास्पद पराजय पछि पार्टी रुपान्तरणको मुद्दा उठाउने सहकर्मीहरु गगन लगाएत अन्यबाट शर्मा अहिले अलग छन् । त्यसैले पनि शर्मालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित हुन असजिलो हुन सक्छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेसको अहिलकै नेतृत्वबाट नेपाली नागरिकसंग टुटेको सम्बन्ध जोड्न असम्भब रहेको भन्दै महाधिवेशन बाट वासी नेतृत्वलाई बिदा गर्नुपर्ने विचार राख्दै आएका गगनलाई युवा भनिने तर ६० नाधेका कति महाधिवेशन प्रतिनिधिले विश्वास गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । उता साथी समूहबाट उछिट्टिएर प्रबक्ता बन्न पुगेका र पाका नेताहरु प्रति सद्भाव प्रकट गरिरहेका शर्मालाई उम्मेदबार बन्ने अवसर आउँछ÷आउँदैन र उम्मेदबार बने पनि महामन्त्रीमा निर्वाचित हुन सक्छन्÷सक्दैनन त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
यी दुइ युवा नेतालाई कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको र नयाँ विचार अनि उर्जाका साथ कांग्रेस अगि बढ्ेको हेर्न चाहने धेरै छन् । तर चुनौति पनि त्यत्ति नै छ दुबैलाई । नयाँ पुस्ता भनेर मात्र हुँदैन नयाँ विचार पनि हुनु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् । हामी भए गथ्र्याै भनेर मात्र हुँदैन पहिले केही गरेर देखाउनु पर्छ, विचारमा नविनता हुनु पर्छ भन्नेहरुको विचारमा पनि दम छ ।
महाधिवेशनका मतदातालाई कामले रिझाउन अबका नेता लाग्नु जरुरी छ । नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता अब गुट उपगुटमा होइन नेताको काम र इमानदारीता हेरेर नेता चयन गर्न जरुरी छ । तब काँग्रेसमा उत्साह र उर्जा आउँछ ।
विपद् पूर्वतयारी तालिम सम्पन्न